Akhriso: Muxuu farmaajo ka yiri socdaalka lama filaanka ah ee uu ku tagay dalka jabuuti iyo waxyaabihii uu halkaasi kala kulmay? | Kismaayo24 News Agency
Akhriso: Muxuu farmaajo ka yiri socdaalka lama filaanka ah ee uu ku tagay dalka jabuuti iyo waxyaabihii uu halkaasi kala kulmay?
Wednesday May 24, 2017 - 6:59 under Somali News by Tifaftiraha K24
Jabuuti, 24ka May, 2017- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa booqasho rasmi ah oo labo cisho ah ku jooga Jamhuuriyadda Jabuuti.
Madaxweynaha oo si heersare ah loogu soo dhaweeyay magaalada Jabuuti ayaa salaam sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka baambeyda, keddibna waxaa isaga iyo wafdigiisa loo galbiyay qasriga madaxtooyada oo uu wada hadallo kula yeeshay dhiggiisa Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle.
Madaxweyne Farmaajo ayaa uga mahadceliyay Madaxweynaha Jabuuti kaalintii uu ka geystay nabadeynta iyo dowlad dhisidda Soomaaliya, wuxuuna qiray in shacabka Soomaaliyeed ay abaal weyn uga hayaan sida ay ugu soo gurmadeen, walina uga qeyb qaadanayaan hawlgalka ciidamada AMISOM.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale booqday Xarunta Barlamaanka Jabuuti. Hadal kooban oo uu halkaas ka jeediyay ayuu kula dardaarmay in ay ilaashaadaan wadajirkooda iyo midnimdooda.
Dhanka kale, Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Arbaco ah ka qeybgalay xafladda furitaanka Dakadda Dooraaleh oo 15 KM u jirta caasimadda. Dakaddan oo ah mid casri waxaa maalgeliyay shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha.
Wafdiga Madaxweynaha ayaa maanta gelinka dambe soo gabogabeyn doona safarkooda Jabuuti, waxayna uga sii gudbi doonaan dalka Qatar oo ay casuumaad rasmi ah ka heleen Amiirka dalkaasi Sheekh Tamiim Bin Hamad Althani.
Booqashadan waxaa madaxweynaha ku wehliya Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah Mudane Yuusuf Garaad Cumar, Wasiirka Gaashaandhigga Mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed, Wasiirka Amniga Gudaha Mudane Maxamed Abuukar Isloow iyo Wasiirka Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha Mudane Jamaal Maxamed Xasan.